အ.ထ.က(၆)မော်လမြိုင် - ဝီကီပီးဒီးယား
အ.ထ.က (၆) မော်လမြိုင်
ဖိုင်:BEHS No.6Mawlamyine, logo.png
မြစိမ်းဆောင်၊ အ.ထ.က(၆) မော်လမြိုင်
အထက်လမ်းမကြီးနှင့် ထားဝယ်တံတားလမ်းထောင့်၊ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်
ပန်းအောင်, မင်း (လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ)
အမှတ် (၆) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ မော်လမြိုင် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့အတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ယခင် မော်တလိန်းဂျဒ်ဆင်ကျောင်း ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပြီး မူလက အေဘီအမ် အမျိုးသမီးကျောင်းအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁.၁ မော်တလိန်း အမျိုးသမီးကျောင်း (၁၈၆၇-၁၉၄၆)
၁.၂ မော်တလိန်းဂျဒ်ဆင် အထက်တန်းကျောင်း (၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ မေလ)
၁.၃ အ.ထ.က(၆) မော်လမြိုင် (၁၉၆၅ မှစ၍)
မော်တလိန်း အမျိုးသမီးကျောင်း (၁၈၆၇-၁၉၄၆)[ပြင်ဆင်ရန်]
မော်တလိန်း အမျိုးသမီးကျောင်းသည် ၁၈၆၇ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင်တွင် စူစန်ဟာ့စ်ဝဲလ် ဆိုသူ အမျိုးသမီးက စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကိုလိုနီကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ခဲ့သော ပထမဆုံး အေဘီအမ်ကျောင်းများအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
မော်တလိန်းဂျဒ်ဆင် အထက်တန်းကျောင်း (၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ မေလ)[ပြင်ဆင်ရန်]
နောက်ပိုင်းတွင် မော်တလိန်းမိန်းကလေးကျောင်းနှင့် ဂျဒ်ဆင် ယောက်ျားလေး အထက်တန်းကျောင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး မော်တလိန်းဂျဒ်ဆင်ဖြစ်လာသည်။ မော်တလိန်းဂျဒ်ဆင်ဟူ၍ ဖြစ်လာချိန်တွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း ၁၄၇၆ ယောက် ရှိခဲ့ပြီး ထိုအချိန်က ကျောင်းအုပ်ကြီးမှာ ဦးအောင်ကြွယ် ဖြစ်သည်။
အ.ထ.က(၆) မော်လမြိုင် (၁၉၆၅ မှစ၍)[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၆၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာသိမ်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း ၏ စစ်အစိုးရက ၁၉၆၅ ခုနှစ် ပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီးနောက် ကျောင်း၏အမည်ကို အမှတ် (၆) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ မော်လမြိုင် အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
↑ ရန်ဒို့ဖ် ဟောင်းဝဒ် (၁၉၃၁). Baptists in Burma. The Judson Press. စာမျက်နှာ ၉၁–၉၃
↑ မစ်ရှင် ၁၉၁၉-၀၂ အတွဲ ၁၀၊ အမှတ် ၂ စာမျက်နှာ ၉၉
↑ Burma Baptist Chronicle − မောင်ရွှေဝ ၁၉၆၃ စာမျက်နှာ ၂၇၉
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အ.ထ.က(၆)မော်လမြိုင်&oldid=668939" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၀:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။